Vaovao - fampirantiana fitsaboana Alemanina
Amin'ny 15 Novfaha 2019, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia mandray anjara amin'ny fampirantiana fitsaboana Alemanina. Tao amin'ny fampirantiana, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia nampiseho vokatra avo lenta betsaka, toy ny Urine Bag, Heparin Cap ary IV Cannula. Ireo vokatra rehetra ireo dia malaza be amin'ity Exhibition ity. Ny antony mahatonga ny vokatra malaza satria ny mpandraharaha za-draharaha dia maniry foana ny hividy vokatra avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana, noho izany mora ny mahatakatra ny antony Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia mahazo be dia be ny baiko avy any Torkia, Angletera, Romania, Pakistan, Espana , Polonina, Afrika atsimo, Kenya, Arzantina, Kolombia.
Ny tale jeneralin'i Chan sy ny mpitantana ny vokatra Zhong dia nijanona herinandro iray tany Alemana, nihaona tamina mpiara-miombon'antoka mpivarotra tsara eran'izao tontolo izao koa izy ireo. Amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ireo mpiara-miasa ireo dia mahazo tombana tsara ny Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd. Ireo mpiara-miasa rehetra ireo dia mbola mifandray amin'ny orinasanay ihany. Nilaza ny talen'ny jeneraly Chan: "Mifanena amina namana vaovao ary asehoy ny tanjaky ny orinasa no hevi-dehibe hidiranay amin'ny fampirantiana fitsaboana Alemanina, ary efa vitantsika izany".
Zhong talen'ny vokatra Zhong koa dia miresaka momba ny vokatra tsara momba ity fampirantiana ity. Voalohany, natoky tena tamin'ity fampirantiana ity izy. Ny zava-misy fantany fa ny vokatra namboarinay sy amidinay dia eken'ny tsena, izay vaovao tsara ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny Huaian Medciom Medical Technology Co., Ltd. Faharoa, ny teknolojia ara-pitsaboana Huaian Medicom dia hanana fiantraikany bebe kokoa eran'izao tontolo izao, izay dingana iray lehibe manandanja ho an'ny orinasa.
Amin'ity fampirantiana ity, Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd dia midika hoe mitodika amin'izao tontolo izao, ary manandrana ny ho osy ho an'ny fikarakaran'olombelona, ​​ary tsy hahafoana izany tanjona izany mihitsy izahay. Efa eo an-dàlana i Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd.
Fotoana fandefasana: Nov-15-2019
Pads amin'ny alikaola, Ny haben'ny lelan'ny fandidiana, Iv Catheter, Tube fihinanan-jaza, Suction Catheter, Alikaola,